काठमाडौ स्मार्ट सिटीको प्रतिवेदन तयार, चार नयाँ शहर बन्ने, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौ। काठमाडौं उपत्यकाको चार कुनामा आगामी पाँच वर्षमा चारवटा नयाँ शहर निर्माण गर्न छानिएको परामर्शदाता कम्पनीले स्थलगत रिपोर्ट बुझाएको छ । सरकारले २०७४ साल २५ बैशाखमा राजधानीको चार कुनामा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौ उपत्यकाको चारवटै कुनामा चारवटा स्मार्ट शहर विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो । शहरी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक क्षेत्रबाट १०० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट ४०० अर्ब लगानी जुटाएर स्मार्ट सिटी बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । सरकारको निकै महत्वकाँक्षी कामका रुपमा रहेको यस आयोजना आगामी ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
उपत्यकाको चार कुनामा १ लाख ३० हजार रोपनीमा चारवटा शहर विकास गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यि चारवटै शहरलाई बाहिरी चक्रपथसँग जोडिने छ । प्राधिकरणका अनुसार पहिलो काठमाडौं इशानको डिपिआर निर्माणको काम फिनल्याण्डको हेलेन एण्ड आर्किटेक जेभीले गरिरहेको छ । जसको स्थलगत रिपोर्ट तयार भइसकेको छ ।
अहिले डिपिआरको काम भइरहेको छ । एक वर्षअघिबाट सो कम्पनीले अध्ययनको काम सुरु गरेको हो । स्थलगत अध्यययनकालागि १८ महिनाको समायावधि पाएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार, यो शहर १ लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने छ । यो शहर पूर्ण रुपले विकास गर्न लागिएका चारवटा मध्ये सबैभन्दा ठूलो हुनेछ । यो काठमाडौंको पुर्व उत्तर दिशामा विकास गर्न लागिएको हो । पूर्वमा भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, तेलकोट, भन्ज्याङसम्म तथा पश्चिममा मुलपानी क्रिकेट स्टेडियमबाट मुलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल भक्तपुरसम्म फैलने छ । यसैगरि, उत्तरमा साँखु बजार तथा दक्षिणमा भक्तपुरको पुरानो बाटोसम्म फैलने छ ।
तेस्रो काठमाडौं नैऋत्य शहरको पनि डिपिआर निर्माणको काम इमआरसि र एनइएसिटी एडी जेभीले गरिरहेको छ । दक्षिण पश्चिम दिशामा विकास गर्न लागिएको यो शहर १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा नै फैलिने छ । यो ललितपुरमा निर्माण हुनेछ । पूर्वमा छ्यासिकोट देखि साविकको सैबु गाविसको सिमाना हुँदै फर्सिडोल बागमती नदीको झोलुङगे पुलसम्म पुग्नेछ । यसैगरि, पश्चिममा बागमती नदिको सिमानासम्म तथा दक्षिणमा बागमती नदिसम्म फैलिने छ । चौथो काठमाडौं उत्तरमा निर्माण हुने स्मार्ट शहर रहेको छ ।
यो शहर पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा विकास हुने छ । पूर्वमा सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाईपास पुग्नेछ । पश्चिममा काभ्रेस्थलीदेखि बाईपास जाने मुल सडक छुनेछ । उत्तरमा सपनातिर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलितिर जाने छ । दक्षिणमा ग्रीनल्याण्ड चोकदेखि मनोरथ हँुदै महादेवखोला काभ्रेस्थलीको मुल सडकको पुल छुने छ । प्राधिकरणको लक्ष्य अनुसार पहिलो स्मार्ट सिटी काठमाडौको मुलपानीदेखि खरिपाटीसम्म फैलिएको हुनेछ ।
सरकारी योजना अनुसार काम अघि बढे अब केही वर्षमै काठमाडौं उपत्यकाका चार कोणमा अत्याधुनिक नयाँ सहर बन्नेछन् । कसैले तिनलाई नयाँ सहर र कसैले ‘स्मार्ट सिटी’ नामाकरण गरेका छन् । जहाँ हालसम्म विश्वमा उपलब्ध सबैखाले सहरी सुविधा र सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुने छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने गरी यस स्मार्ट सिटीको अवधारणामा चार नयाँ सहरको अवधारणा अघि बढाएको हो । यी सहरमा उपलब्ध ‘स्मार्ट’ सुविधाको कुनै पनि सीमा नभएकाले नयाँ सहर नामाकरण गरिएको प्राधिकरको दाबी छ । राजधानी दैनिक